Free incoko amagumbi ngaphandle ubhaliso, Akukho Sayina, Akukho Ukhuphele
Ukusetyenziswa zethu lencoko akusebenzi kufuna na ukhuphele okanye ubhaliso sayina kwaye kusenokuba inikezelwe ngqo kwi-site. Ebhalisiweyo ilungu ingaba elicetyiswayo indlela ukungena lencoko njengoko ufumane agciniwe igama lomsebenzisi, kwaye musa kufuneka ufake iinkcukacha ixesha ngalinye. Ezinye ilungu unako imboniselo inkangeleko yakho lula kwaye yongeza kuwe njengoko umhlobo, ukuba baya kufuneka kukuthumela imiyalezo kwi-intanethi. Bust visitors kufuneka uzalise ngasentla ifomu kunye ezisisiseko iinkcukacha, kuphela ngoko banako faka lencoko. Bust visitors musa get agciniwe amagama kodwa ingaba elungileyo indlela vavanya lencoko okanye ukuba akasoze abe bothered ukwenza ingxelo kunye nathi. Oko kwenzeka ukuba ubudala lencoko kwaye kutheni angenise incoko entsha software. Zombini ubudala lencoko software apho iqela ukwenza utshintsho kubo bobabini nzima kwaye ixesha consuming, ngoko ke ngoku kuba wadala ozenzele wona incoko izixhobo zethu kunye woloyiso ezo ngxaki.
Zethu incoko software ingu kwi-eyesibini isigaba kwaye lento bug, apho sisebenzisa ngobukho kwaye iya kuba kubekiwe kwicandelo elilandelayo nokuza uhlaziyo.
Uza udibanisa ividiyo ilizwi incoko umsebenzi
Kubaluleke kakhulu kusenokwenzeka ukuba siza yongeza ilizwi incoko umsebenzi kwi-kufutshane elizayo kodwa malunga ‘ividiyo incoko’ sikulungele kodwa kwenzeka isigqibo. Emva kokungenisa incoko, uzakunikwa kunye uluhlu incoko amagumbi ukukhetha ukusuka kwi, ifana ne yintoni eboniswa kwi-ngasentla umfanekiso. Igama lonke uluntu lwakho yabucala amagumbi iya kuboniswa, ecaleni inani abantu ngamnye igumbi. Uza kukwazi ukungena igumbi ngokunqakraza ‘Dibanisa’ iqhosha. Abanye incoko amagumbi unakho kuphela kufumaneka ukuze ubhaliswe amalungu. Ingentla umfanekiso yilento kuya jonga ngathi xa ukhethe abaziwayo a lencoko, ngezantsi Chabahar uphawu kukho incoko ulawulo amakhonkco kananjalo kuquka yangoku lencoko ke igama. Elisekhohlo iphepha uluhlu onke amagumbi kufuneka abaziwayo kwaye ivumela ngokukhawuleza iyatshintsha phakathi kwabo.
Ephakathi iphepha ibonisa yonke imiyalezo exchanged egumbini
Akunjalo icala uza bonisa uluhlu amalungu abo akhona ngaloo igumbi. Ukunqakraza ilungu ke amagama kwi-ilungelo-icala uluhlu iya kubonisa ‘umsebenzisi iinketho’ njengoko kubonisiwe umfanekiso ngasentla kwaye ngamnye khetho wachaza ngezantsi. Umzekelo-icatshulwe ivumela ukuba umzekelo-icatshulwe ilungu kumyalezo wakho, kwaye uya kubonakala kukhankanyiwe kubo. Uthetho olusezantsi Emva bhala umyalezo wakho, ukukhetha ‘uthetho olusezantsi’ khetho thumela umyalezo wakho njengoko a uthetho olusezantsi. A uthetho olusezantsi kuphela ebonakalayo kuwe kwaye umntu kwaba wathumela. Umyalezo wabucala Olu khetho ndiya kuthumela ‘yabucala isicelo’ umntu okhethiweyo kwaye ndiya kubonakalisa abo ‘izilumkiso’. Imboniselo Yabucala Olu khetho kuphela ibonisa kuba ebhalisiweyo amalungu kwaye liya kusa yabo inkangeleko iphepha. Lahla khetho ikuvumela ukuba hayi bona na imiyalezo ethunyelwe ngumntu kufuneka sukuyihoya. Ezinye Bubonke i menu ibonisa abanye ezisisiseko ulwazi malunga ukuba ilungu. Iinketho ezikhoyo kwi izicwangciso iphepha ingaba njengoko ngezantsi: Igama Igama lombala umbala khetho ikuvumela utshintshe isiqhulo sakho ke umbala kwaye iya kubonakala ukuba abanye kulo umbala okhethiweyo. A random umbala ngu esikhethiweyo ngokwendalo kuba wena xa ufuna ukungenela incoko. Ubungakanani Bomgca ubungakanani khetho ikuvumela utshintshe incoko ubungakanani befonti. Indlela umyalezo Olu khetho ivumela ukuba ubona okanye fihla ‘umsebenzisi na igumbi’ kwaye ‘umsebenzisi ekhohlo igumbi’ imiyalezo. Thintela abasebenzisi Olu luluhlu amalungu kufuneka ezivalekileyo, kwaye uyakwazi unblock nabo apha
← Mexican Dating Site Kuhlangana Zinokuphathwa Mexicans-Intanethi
Yintoni eyona ndlela kuhlangana Russian icacile kuba ezinzima budlelwane. Kufuneka mna nje hamba Saserashiya. EM →